ဒီအတိုင်းပဲ သွားတော့မှာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီအတိုင်းပဲ သွားတော့မှာလား
Posted by phone_kyaw on Jun 6, 2012 in Copy/Paste | 23 comments
ဂန့်ပါဘူးအေ အူးလေးဂျီးဂ မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာကြာဘီဒဲ့
ဖြဲဒီးက ရှာကီရာလိုကနေတော့ ရှာကီဖြဲပေါ့နော်
ကျုပ်အထင် ဟို ဆယ်ယောက်ထဲမှာများ ရောပါသွားသလားလို့ ။
သတိရနေတာ ။ ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစေ ။
Long time no see your posts. Good Luck!
နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ရှိနေသေးလို့ အမေက ထိုးမဲ့ဆင်တလှမ်းဆုတ်ထားတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ လွှတ်တော်ဆို တာကလဲ တရက်တောင်မပြည့်ပဲတက်ထားတော့ အတွင်းပိုင်းခြေအနေလေ့လာနေတယ်လို့ သုံးသပ်မိ ပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးမှ အမေက စကားနဲသွားတာသတိထားမိပါတယ်။ အခုတလောမှာလဲ အခြေအနေတွေတအားရှုပ်ထွေးနေတော့ အမှားမခံတဲ့ကာလ ဖြစ်နေတာမို့ စောင့်ကြည့်ပေးပါ။ အမေ ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ကာလကြာရှည်နေပြီဖြစ်တဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပြသနာ အမေ တခေါက်ထဲနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာ သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီမို့ ယုံကြည်စွာနဲ့ခဏစောင့်လိုက်ကြရအောင်လား ကိုဘုန်းကျော်။ စစ်တပ်ကလဲ လိုအပ်ရင် လွှတ်တော်ထဲက ၂၅ % ကိုလျော့ပေးမယ်ဆိုတာကလဲ အမေနဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှု့ရလာဒ်ဆိုတာ ယုံမှားသံသယရှိစရာမရှိပါဘူး။ စောင့်ပေးပါ။ နှစ်ပေါင်းများ စွာ စောင့်လာပြီးမှ ဒီ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက် ဘာလို့မစောင့်နိုင်ရမှာလဲ။ အခြေခံအုပ်မြစ်အသားသေဖို့ လိုအပ်ရင်စောင့်ရမှာပါပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာမရလာတဲ့အခွင့်အရေး အခုမှစရခါစမှာ လောဘမတက်မိဖို့ အထူးသတိထားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ စောင့်ကြပါစို့။
မိန်းမကို ပေါက်ကရလျှောက်ပြောလို့ သနပ်ခါးတုံးနဲ့ အထုခံရပြီး အတိတ်မေ့သွားပြီထင်နေတာ
အူးလေးပြောတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ..အတိုက်အခံလဲ လုပ်..ကူညီတာလဲ ကူညီပေးကြစေချင်သဗျား..
ဒါကြောင့် ပုရွက်ဆိတ်တွေကို အကောင်ကြီးကြီးက ဦးဆောင်ပေးသင့်တယ် ထင်ပါဒယ်..
ဘယာကြော် မသဲနု အားပေးပါဒယ်နော်
မောင်ရင် ဘုန်းကျော်တစ်ယောက်ပျောက်ချက်သားကောင်းနေလိုက်တာ ခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်ဗျို့။
မမြင်တာကြာပြီ အချစ်ဆုံး ဘုန်းကျော်လေး (မှတ်ချက် စိုင်းထီးဆိုင်လေသံဖြင့်ဖတ်ပါရန်)
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုကို စုစည်းပြီး နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုသံ တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသင့်နေပြီ။ ဒါကတော့ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို ကျင်းပပြီး အစိုးရအသစ် တစ်ခု တင်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ အေး ဒီအတိုင်းပဲ သွားတော့မယ်ဗျို့။ ရွာဆူအောင်လုပ်တာအားမရလို့၊ တိုင်းပြည်ပါဆူအောင်လုပ်ချင်နေတာလား…အလုံးစုံပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လုံလောက်တဲ့အချိန်လိုတယ်။ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲလို့မရဘူးလေ။ စိတ်ရှည်မှပေါ့။
ကိုဘုန်းကျော်တို့က ရွာသူ/ရွာသားတွေ ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် အမြဲကျန်းမာပါတယ်….။ စိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်..။
Perth ကနေ Leinster လို့ ခေါ်တဲ့ တောမြို့ လေးကို ပြောင်းရတယ်။ အင်တာနက်လည်း မရသေးဘူး။ အိမ်ထောင် ပစ္စည်းတွေတောင် လမ်းမှာပဲ ရှိနေသေးတဲ့ဘ၀။ အခုသုံးနေတဲ့အင်တာနက်က Samsuang Glaxy SII ဖုန်းကို မော်ဒန်လုပ်ပြီး ၀ိုင်ယာလက်စ်နဲ့ ဖမ်းပြီး သုံးရတော့ လိပ်လိုပဲ။ အင်တာနက်ကောင်းကောင်းရတော့မှ ခင်ဗျားတို့ နဲ့ တွေ့ ကြတာပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ်…ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ပို့ သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် ကျန်းမာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာမှာနေရတာတော့ ပျင်းတယ်ဗျို့ ။
အူးလေး အူးလေး ပျင်းနေရင်
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုကို စုစည်းပြီး နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုသံ တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသင့်နေပြီ။ ဒါကတော့ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို ကျင်းပပြီး အစိုးရအသစ် တစ်ခု တင်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။
အေး…ဒီအတိုင်းပဲ သွားတော့မယ်ဗျို့။ ရွာဆူအောင်လုပ်တာအားမရလို့၊ တိုင်းပြည်ပါဆူအောင်လုပ်ချင်နေတာလား…အလုံးစုံပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လုံလောက်တဲ့အချိန်လိုတယ်။ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲလို့မရဘူးလေ။ စိတ်ရှည်မှပေါ့။
စ်ိတ်ရှည် ဇွဲသန် သည်းညည်းခံ
အကာသယဉ်မှုး ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အူးလေးဖုန်းကျော်ဂို သဒိရလို့ ရောင်စုံကာတွန်းထဲမှာတောင်
“ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာ မဆို အကြမ်းမဖက်တဲ့ တိုက်ပွဲကိုကျွန်မအားပေးတယ်။ ကျွန်မတို့
အကြမ်းမဖက်တဲ့ လမ်းစဉ်ကနေ လုံးဝသွေဖယ်မသွားတဲ့အကြောင်းကတော့ အကြမ်းမဖက်တဲ့ တိုက် ပွဲဟာ ရေရှည်မှာ ပိုကောင်းလို့ပဲ။ ဒီလမ်းစဉ်က အချိန်ပိုကုန်ချင်ကုန်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့အတူ တွဲပါလာ မယ့် ဒဏ်ရာတွေလည်း ပိုနည်းလိမ့်မယ်”